बामदेव वैराग्य…::Online News Portal from State No. 4
राजनैतिक व्यक्तिलाई चिन्न जनताको आफ्नै प्रकारको कोंण हुन्छ । मनमोहन को हो चिन्नुहुन्छ भनेर एक वृद्धलाई सोध्दा । हामीलाई भत्ता दिने मान्छे हुन बाबु किन नचिन्नु भन्थे बागलुङ कालिका मन्दिरमा भेटिएको एक वृद्धले । हुन त हेलिकप्टरबाट झरेर अस्पतालमा उपचार गराईरहेका मनमोहनलाई शैयाबाट राजिनामा दिन बाध्य गराउने पनि थिए । उनीहरूले फेरी मनमोहनलाई कसरी चिन्दछन् होला त्यो फरक कुरा हो । अहिलेका केपी ओलीलाई पहिलो पटक प्रम हुँदा जुन तवरले हेर्थे त्यो अहिलेको अवस्था छैन तर कतिपयलाई भने जनताले गलतकै रुपमा राखेको छाप त्यही कायमै राख्ने गरी व्यवहार गरेको पाईन्छ । बामदेव गौतमा एमालेमा हुँदा पनि शरिर एमालेमा थियो दिल र दिमाख दुबै माओबादीमा थियो । उनी राजनैतिक दक्ष प्रजापति नै थिए । माओबादी युद्धमा पनि उनी माओबादीका लडाकुहरूलाई प्रहरी हिरासतमा सुरक्षित नै रहुन भनेर प्रहरीसँग निकट भईरहे भने माओबादी भेट्न धेरै ठाउँमा पुग्थे । जुन कुरा आँफुलाई सहयोग गरेको भनेर भनिराख्ने कृष्ण केसी र हिमाल शर्मामार्फत थाहा लाग्छ ।
यो पृष्ठभूमि नबुझी अहिले बामदेवको चर्च गरेर काम छैन । एमाले फुटाएर एउटो झुण्ड बोकेर पुगेको केही समयमै एमालेमा आएका बामदेवले एमालेका नेताहरूलाई के सम्म भनेन । त्यो स्वभाव भएका बामदेव आज नेकपालाई पुन विबादमा ल्याउन खोज्दै थिए हाललाई टर्यो तर यो प्रवृति कायम हुँदा भोली नेकपामा पुन यि कुराहरू आउने छन् । एमाले र माओबादी नमिल्दै एमालेको गुट मा बामदेव माओबादीसँग निकट थिए । पार्टी एकिकरणका लागी बामदेव भन्दा बढी माधव नेपाल र योगेश भट्टराईहरू लागे जसको असर अहिले देखिंदैछ । नेकपाका स्थाई प्रतिपक्ष जस्ता छन् माधव नेपाल र योगेश भट्टराईहरु जसको जग बामदेव हुन र बामदेवका जग प्रचण्ड हुन । देशमा राजनैतिक स्थायित्व सरकारको दुई तिहाईले समेत नहुने रहेछ । प्रचण्डलाई कुनै उच्च पद जसका कारण उनको राजनैतिक बिचौलियापन कम हुन नसके सम्म बिकास सम्भव छैन । अस्थिर भईरहने तर त्यसलाई क्रमभंगको नाम दिएर संधै अस्थिर राखी राख्ने पात्रका रुपमा प्रचण्ड छन् जसको प्रयोगको पछिल्लो उदाहरण बामदेवलाई काठमाण्डौ ७ मा उठाउने जो दुस्साहस हो ।
केपी ओली पनि एउटा सानो घेरामा सिमित भईरहेका छन् । प्रचण्डको अहिलेको सबै प्रयास देश बिदेश दुबै तिरबाट जति धेरै केपीको ओलीचन हुन्छ त्यति आँफुलाई छिट्टै सत्ता प्राप्त हुने सोचले अघि बढेका छन् । अहिले बामदेव र योगेश भट्टराईलाई केपीको भन्दा बढी प्रचण्डको भरोसा छ र राजनिति सुरक्षित होला भन्ने आश पनि छ । बर्दियाबाट जनताले भो भनेर अस्वीकार गरिसके पछि बामदेवलाई जसरी पनि संसदमा ल्याउने अस्वासन प्रचण्डबाट पाएको कुरा बामदेवले फायर साईडको कार्यक्रमा भनेका थिए । बामदेवलाई सत्ताको चाह यति रहेकी कि काठमाण्डौमा रामबीरलाई सम्झाउनु अगी देशका धेरै ठाउँमा धेरैलाई मनाउन लागी परे धेरैले नमाने पछि काठमाण्डौंका रामबीर हनुमान फेला परे जो यसरी नाङगिएकी धेरै मान्छेहरू घरबाट निस्कनै गाह्रो भयो । रामबीर ब्यापारी हुन । ब्यापारी राजनितिमा आए भने कुन हालत हुन्छ त्यो चाउचाउ व्यापारी एमालेमा भाउ नमिलेपछि काँग्रेसमा गए । भुकम्प पिडितलाई एक हजार घर बनाई दिने भने तर नबनाए न कुनै राहत दिए । त्यस्तै रामबीरले पार्टीका लागी आँफुले पद छोड्न तयार भएको भनेपनि यसमा कतिको सत्यता छ यो विश्वसनीय कुर भने होईन ।
चुनावमा उठ्ने बेला पाँच बर्ष सम्म काम गर्छु भोट देउ भन्ने । जनता भन्दा ठुलो अरू कोही होईन पनि भन्ने तर अहिले पार्टी भन्दा ठुलो कुरा अरू केही होईन भनेर राजिनामा दिने रामबीर बामदेवकै ग्याङ र ट्याङका हुन । यस्तालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नु पर्ने हो तर पार्टीमा गुटै गुटले यस्तो कुरा अगाडी बढे सरकारै ढल्न सक्छ । नेपाली राजनितिमा बुथकब्जाको सरकारी बैधयता दिने बामदेव गौतम नै हुन जसले स्थानीय चुनावमा बुथ कब्जालाई सस्थागत गराए । अहिले उनले पार्टीभित्र जुन किसिमको बातावरण गराएका छन् त्यो पुनरावृत्ति हुने थियो । काठमाण्डौबाट उनलाई जिताउनै पर्ने के छ ? बामदेव नहुँदा संसदमा के पास भएन वा किन संसदमा लान खोजिंदैछ । बामदेवको बैराग्यपन बेला मौकामा जाग्ने गर्छ । सत्तामा भए पनि नभए पनि सबैले आँफुलाई मानी राखुन वा पुजी राखुन भन्ने बिचार राख्ने बामदेवका यस्ता कामले पार्टी मात्र होईन प्रवृति झल्किन्छ । काँग्रेसमा जसरी गलत मान्छेको संरक्षणमा धेरै व्यक्तिहरूको चाङछ त्यस्तै कम्युनिष्टमा पनि छ । जुन बामदेवमा देखिन्छ ।
झलनाथ खनालले आफ्नो भूमिका नभएका कारण पार्टी एकताका केहि हप्ता निकै चम्के बामदेव चम्केका थिएनन त्यसको प्रमुख कुरा प्रचण्डले कुनै न कुनै चोर बाटोबाट माथी पुर्याउने बचन दिएका थिए तर एकता पछि प्रचण्डले छिट्टै यो तथ्य बाहिर ल्याएनन ताकी भोली केपीलाई सबैले बेठीक भनुन त्यहि बेला यो कुरा राखौंला भने केपी ओलीका बिबाद चुल्याउने उपयुक्त समय ठाने र प्रचण्डले यो बेला यो मुद्धा उठाए । बामदेवको चाहना पुरा गर्ने नाउँमा यो खर्चिलो चुनाव गराएर थप खर्च बढाउनु ठीक छैन । अहिले अलि बढी विरोध भएका कारण रोकिए पनि पछि फेरी कुरा उठ्ने छ । अतः प्रचण्डका पछि लाग्ने बामदेवको मात्र होईन धेरैबाट सजग नभए कुनैपनि दिन पार्टी फुट्न सक्छ जसको नेतृत्व बामदेवले लिने छन् ।